Nankaiza ny arendriko teto?
2007-06-26 @ 14:51 in Andavanandro
Mialoha ny tsikaritra sy ny fitantarana dia miarahaba ny mpamaky nahatratra ity asaramanitra 2007 fankalazana ny fetim-pirenena malagasy ity. Enga anie mba hahatratra ny tena fahaleovantena tokoa ity firenena mamintsika ity. Manomboka eto dia ny fitantarana ny zava-mitranga ankehitriny eto amin’ny tanàna no lazaiko.
Tiako ihany koa ny manambara fa dia sahala amin’izay tantarain’i Hery ao amin’ny blaoginy ny teny an-tanàna fahazaza. Izaho indray moa tsy tany amin’ny citén’ny tafika fa mifanila amin-dry zareo ihany. Fivoarana ve no misy sa tena efa adino tokoa ny fiaraha-mientan’ny iray tanàna. Raha ny taty aminay aloha da mampahonena mihitsy.
Vao midify ny masoandro ny 25 jona (fa mbola mazava) dia mihitsoka avokoa ny fiara mandeha eny amin’ny arabe lehibebe fa fandalovan’ny maro rehetra eto Antananarivo. Ny farihin’Anosy manko no foiben’ny tanàna amin’ity takariva ity. Te-hijery akaiky ny afomanga efa zary fandefa isantaona manko ny rehetra, na ny kely na ny lehibe. Io no tsy dia nisy loatra tamin’ny andron’ny revolisiona sosialista. Ny tadidiko dia indray ihany no nisy afomanga rehefa 25 jona tamin’izany fotoana izany no sady mahalana be ny fanapoahana azy.
Amin’izao fotoana izao dia efa ifampitadiavana dieny tolakandro ny toerana itazanana ny afomanga. Adino hatreo ny arendrina. Fitondrana ny ankizy hijery fa tsy hitondra fanilo no mahamaika. Mahavariana ihany koa moa fa tahaka ny lasa henatra mihitsy ilay mitondra arendrina. Tsy dia misy firy intsony ny zaza faly hitondra ny kilalao nahafinaritra fahazaza io, eny fa na dia izay natao tanana toy ny jiro kapoaka aza tsy fahafinaretana ho an-dry zareo izany. Lesoka lehibe amin’izy ity angaha ny tsy fifankafantarana sy ny fifaneraseran’ny mpifanolo-bodirindrina intsony sy ny tsy fisian’ny olona mpitarika araka ny tadiavin’ny filoham-pirenena amin’izao fotoana izao. Loza mitatao ho an’ny firenena izany toe-javatra izany raha mandinika tsara isika.
Ny hany mitoetra izany dia izay arendrina arehitry ny olona eny an-davarangany amin’ny alina mialoha ny fetim-pirenena io.
Ambohipihaonan’ny olona faharoa indray ny teny Analakely. Efa fahazarana indray moa io raha vao misy fotsiny ny andro tsy fiasana toy ny amin’izao fotoana izao. Raha mihalefy manko ny fikatsoan’ny fiara any amin’ny arabe lehibebe rehetra dia tsy misy afa-mihetsika kosa ny fiara tafiditra an’Analakely. Tamin’ny 9 ora alina mahery aho no nandalo teny fa tena maro ireo fiara mamono maotera mihitsy. Ny tena olana amin’io fotoana io dia misy ireo vitsy tsy mahatsiaro tena fa mijanona eny afovoany na sisiny mahabahana arabe fotsiny izao. Raha vao tsy hitan’ny polisy manko dia efa izay tiako atao ihany io no manjaka hany ka tsy mitsahatra ny miasa ireto mpitandro ny filaminana ireto.
Fa tsikaritra indrindra dia ny tanora no tena betsaka mifamovoy eran’ny tanàna. Ny atsasaky ny arabe migodana avy eo Andohan’Analakely mankeny amin’ny tahala Rarihasina iny dia efa heverina ho an’ny mpandeha an-tongotra avy hatrany. Mba mivezivezy miaraka amin’ny namana sy mba hanala azy. Fa mahagaga fa tsy dia ahenoana tsipoapoaka loatra na dia amin’ity andro mialoha ny fetim-pirenena ity aza. Asa! Efa lafo ve ny vanja sa enjehin’ny mpitandro ny filaminana izay mivarotra tsipoapoaka? Tsy dia manana vaovao miakasika io aho aloha. Tena mifanesika tokoa ny olona fa mahazo toerana mibahambahana ihany koa moa ireo mpivarotra hanimasaka sy tsakitsaky isan-karazany.
Dia nikisaka ho any ambanin’ny arcades aho fa noheveriko ho malalaka kokoa ny mandeha eny. Kanjo moa dia feno tanora maromaro miara-dalana mipetrapetraka iny lavarangana manontolo iny. Eny ry zareo no mihinana ny tsakitsaky sy milalao karatra. Tsy misy ahafantaranao mihitsy eny hoe fetim-pirenena anie ity ankalazaina ity fa dia izy fety ihany dia efa izy azay. Kely foana ny tsy handingandinganana azy ireo. Hay tokoa moa misy fandihizana idiram-potsiny ao amin’ny Gara ao! Saingy tsy nakany aho hijery izay tao anatiny fa mahimahina ihany aho ny amin’ny fety idiram-potsiny sady tsy voatery hividy zava-pisotro. Tena mba miizaka ny hamalifaly ny mponina tokoa ny Kaominin’Antananarivo renivohitra e!
Rehefa tonga indray moa ny marainan’ny 26 jona (io fa nahitsiko fa misaotra izay nahamarika) dia any amin’ny matso eny mahamasina indray no mitodika nym ason’ny rehetra. Toy ny fanao isan-taona ihany fa ny hany nampiavaka azy kely dia iny nisy alika mpirenireny anankiray tafiditra ny kianja tao anatin’ny matso indrindra. Ahoana koa angaha no nahatafiditra azy io teo? Nihazakazaka ny anao lahy namonjy ny afovoan’ny kianja ka rehefa tonga tandrifindrifin’ny boriborin’ny kianja izy dia nijanona nitoditodika tahaka ireny mpilalao mitady namana hipasiana baolina ireny. Nihoraka I Mahamasina fa tsy nisy loatra ny tahaka ity. Afaka kelikely (tokony folo minitra taoriana) dia nanakaiky kokoa ny mpanao matso ny alika ary manatrika indrindra ny olona ambony no saiky hiavela ampahibemaso. Voatery nandroaka azy ny mpiamina ny filoha iray fa mahamenatra ity ataony. Misy voasazy indray amin’iny aloha!
Fa ny hariva moa dia ny mpanakanto indray no hifandimby hihira eo amin’ny kianjaben’ny Mahamasina ihany. Tsy mbola hitako izay hotantaraina amin’io satria vao ho any indrindra aho io.